၁၁ရက်နေ့ သောကြာနေ့ နေ့လည် နှစ်နာရီလောက်ပေါ့ .. ကျွန်မမေမေနဲ့ဖုန်းပြောနေခဲ့တာ .. မေမေ့ကိုသတိရနေလို့လေ .. လူကအလုပ်ထဲမှာဆိုတော့ ကြာကြာလည်း ဖုန်းပြောလို့မရ .... ဖုန်းချရုံရှိသေး ... ငလျင်စလှုပ်လာပါတယ် ... အော် လှုပ်နေတယ်ဟဲ့ပေါ့ .... ကျွန်မ ရင်ထဲကြောက်စိတ်လုံးဝကို မရှိခဲ့တာပါ .. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နည်းနည်းကြမ်းလာပါတယ် .. ရုံးကဂျပန်မလေးတယောက်က တော်တော်ကိုကြောက်လို့ ရုံးပေါ်မှာတင် အော်ဟစ်နေတာ သူ့ကို ကြည့်ပြီး ရီချင်စိတ်က ဖြစ်သေး .. ဆိုးတယ်နော် ... လူ့စိတ်က .. ဂျပန်ဖြစ်ပြီး ငလျင်ကြောက်ရသလားပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ပြေးဆင်းကြဟေ့ဆိုတဲ့အော်သံထွက်လာတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်းလည်း စကြမ်းလာပြီလေ .. အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ ဖုန်းနဲ့ကတော့ မမေ့မလျော့ ယူုပြီးဆင်းရပါတော့တယ် .. ပိုက်ဆံအိတ်ဆိုပေမယ့် ဝေါ့လက်ပါ .. အထဲမှာ နိုင်ငံခြားသားကဒ်နဲ့ ဘဏ်ကဒ်နဲ့ ပိုက်ဆံနည်းနည်း .. မိသားစုဓာတ်ပုံပေါ့လေ ..
ကျွန်မတယောက်ထဲဆင်းပြေးလို့မရပြန်ဖူး .. စလှုပ်ကထဲက အော်ဟစ်နေလေတဲ့ ဂျပန်မလေးကို ဆွဲပြေးရတာ .. သူကလမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်တော့ဘဲ . အောက်ကိုရောက်လာပြန်တော့လည်း မြေကြီးပေါ်မှာ လူးနေလေရဲ့လေ .. တော်တော်ကြောက်နေရှာတာ . သူ့ကြည့်ရင်းနဲ့ သနားလာတာပေါ့ .. ပထမဦးဆုံး စလှုပ်တာဆိုတော့လည်းလေ .. ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးမှာလည်း တိုက်တွေ ကားတွေက လှုပ်လို့ ယိမ်းထိုးလို့ .. ကျွန်မ ရုပ်ရှင်ကြည့်သလို တအံ့တသြငေးနေမိတယ် .. အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဖုန်းတွေအားလုံး စပိတ်သွားပါပြီ .. အင်တာနက်ကတော့ ရနေသေးတယ် .. အခုချိန်ထိပါပဲ .. ကျွန်မတို့ဆီမှာလည်း LIVE သတင်းတွေ တောက်လျှောက် လွှင့်ပေးနေခဲ့တော့ နားထောင်နေရင်း တအံ့တသြပေါ့ ..
အဲ့ဒါနဲ့ ပထမတကြိမ်ညိမ်သွားတော့ အပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ် .. အော် ဒီတခါတော်တော်ပြင်းလိုက်ပါလားပေါ့ .. ၃မိနစ်လောက်ပဲခြားပါတယ် ... ဒုတိယတကြိမ် ထပ်လှုပ်လာပြန်ပါတယ် .. ဒီတခါ နည်းနည်းပိုကြမ်းတာမို့ ကျွန်မပြေးဆင်းရပြန်ပါပြီ .. ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ အဖော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်မ .. ဒီတခေါက်မှာလည်း ဒူးတုန်နေတဲ့ နောက်ထပ်ဂျပန်မတယောက်ကို တွဲဆင်းရပြန်ပါတယ် .. ကျွန်မတို့နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ အိုဒိုင်းဗားမှာ ဆူနာမီစဖြစ်နေပြိတဲ့ .. ငဟေ့ာက အွန်လိုင်းကနေ လှမ်းပြောတော့ ကျွန်မတို့တွေ ရုံးကတီဗွီကို အပြေးအလွှားဖွင့်ရပြန်တာပေါ့ .. ဖွင့်ထားခဲ့ပြီး အောက်ဆင်းပြေးရပြန်ပါတယ် .. အောက်မှာတော့ တကယ့်ကို ရပ်ထားတဲ့ ကားတွေအားလုံး ၀ုန်းဒိုင်းကြဲနေကြတာ . နောက် .. ကျွန်မလက်ရှိရောက်နေတဲ့ ကာစတန်မာဆိုက်က သူဌေးရပ်ကွက်လို့ ပြောလို့ရတာမို့ .. တိုက်တွေကငလျင်ဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင် အောက်ခြေမှာသေချာစီစဉ်ထားတာတွေပါ .. ကျွန်မ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ တိုက်တလုံးကလွဲလို့ပါပဲ .. စီစဉ်ထားတဲ့တိုက်တွေက မပြိုတာ ရာခိုင်နှုန်းများပေမယ့် တိုက်တလုံးလုံးကို လှုပ်ယမ်းမှုအားက ပိုများပါတယ် .. အက်ရှင်ကားတကားကို ကြည့်နေရသလို တအံ့တသြနဲ့ပါပဲ .. ညိမ်သွားပြန်ပေမယ့် လေတွေတအားကြမ်းလာပြီး အရမ်းချမ်းလာပါတယ် .. အဲ့ဒါကြောင့် ငလျင်ငြိမ်တာနဲ့ ကျွန်မတို့ ပြန်တက်ပြေးရတာပါပဲ ...
အဲ့ဒါနဲ့တတိယတခေါက်ထပ်လှုပ်ပြန်တယ် .. ဒီတခါနဲ့ နောက်တကြိမ်ကအပြင်းဆုံးပါပဲ .. ဘယ်လိုမှကို ရပ်နေလို့မရအောင် ကြမ်းတာပါ .. ဒါတောင်ကျွန်မတို့ နေတဲ့နေရာက တိုကျိုဖြစ်တဲ့အပြင် ငလျင်ဗဟိုချက်မဟုတ်ပါဖူး .. ရုံးကဂျပန်မလေးကလည်း တော်တော်ကို အော်ဟစ်ပြီး ကြောက်လန့်နေပါပြီ .. ကျွန်မတကယ့်ကို ငလျင်လေးကြိမ်လုံးထိ မကြောက်ခဲ့ပါဖူး ... ကြောက်စိတ်လုံးဝကိုမရှိခဲ့တာပါ .. ဆိုးလိုက်တဲ့ကံရယ်ပေါ့နော် .. အဲ့ဒီချိန်မှာ ကျွန်မကို စိတ်ပူတဲ့ ကျူးပစ်ကချစ်သောမောင်နှမတွေက သတင်းစမေးနေကြတာ ပြန်ဖြေရတာနဲ့ ကျွန်မကြောက်ဖို့ မေ့နေလောက်အောင်ပါပဲ .. အိမ်က ကျွန်မရဲ့အကိုကလည်း မေမေကဖုန်းဆက်လို့ဆိုပြီး အွန်လိုင်းရောက်လာပါတယ် .. စိတ်မပူဖို့ဖုန်းဆက်ချင်ပေမယ့် ဖုန်းလိုင်းအားလုံးကဖြတ်လိုက်ပါပြီ .. ရထားလိုင်းအားလုံးလည်း ပိတ်သွားပြီမို ကျွန်မအတွက်ကတော့ ရုံးမှာပိတ်မိသွားတဲ့ အခြေအနေပေါ့ .. အိမ်ကိုလည်း စိတ်မပူဖို့ အွန်လိုင်းကနေလှမ်းပြော .. ကျွန်မ မသေသေးဖူးပေါ့ ...
ညနေ၆နာရိထိုးခါနီးလောက်မှာတော့ ရုံးကကားနဲ့ပြန်ပို့ပေးဖို့စီစဉ်ပေးကြပါတယ် .. ကျွန်မလည်း အွန်လိုင်းမှာရှိနေတဲ့ မောင်နှမတွေကို တတ်နိုင်သရွေ့ အမြန်သတင်းပို့ပြီး .. ပြန်ရတာပေါ့ .. ရထားမရှိပေမယ့် ကားနဲ့ပို့တော့ တော်သေးတာပေါ့နော် .. ကျွန်မအထင်တက်တက်စင်လွဲတော့တာပါပဲ ..
ညနေ၆နာရီထိုးခါနီးစထွက်တဲ့ကားဟာ ညဆယ်နာရီခွဲတဲ့ထိ နှစ်ဘူတာစာလောက်ပဲ ရွေ့တဲ့အပြင် ကားအားလုံးပိတ်သွားတာမို့ ထိုင်စောင့်ရုံမှတပါးပါပဲ .. ကျွန်မတို့လည်း တော်တော်လေးကို ပင်ပန်းလာပြီမို့ လမ်းဆင်းလျှောက်ကြစို့ပေါ့ .. ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်မတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနားက ဘာစတိုးဆိုင်မှမရှိတဲ့ပြင် ရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်း ရေနဲ့ အစားအသောက်အားလုံး ကုန်သွားပါပြီ .. ကျွန်မ အဲ့ဒီကျမှ ဒုက္ခစရောက်တော့တာပါပဲ ..
ကျွန်မအရမ်းပင်ပန်းလာပေမယ့် မတတ်နိုင်ဖူး လမ်းလျှောက်ရတော့မယ် . မဲတင်းပြီးလျှောက်ပေတော့ပေါ့ . တသက်နဲ့တကိုယ် အဲ့လောက်များတဲ့လူတန်းဒီတခါ မြင်ဖူးတာပါပဲ .. တနာရီနီးပါးလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မင်္ဂလာသတင်းကြားရတာ တချို့တချို့သော ရထားလမ်းများပြန်ဖွင့်ပြီတဲ့ .. ကိုယ့်ရထားက မဖွင့်သေးတော့ စောင့်ပေဦးပေါ့ .. အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့စီးမယ့်ရထားလမ်းလည်း ပြန်ဖွင့်တယ်ဆိုရော ၀မ်းသာလိုက်တဲ့ကျွန်မ .. ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ .. ဖုန်းကလည်း ရလိုက်မိလိုက် စဖြစ်လာပါတယ် .. ကျွန်မရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် စိတ်ပူရသေးတာမို့ .. ကျွန်မ လက်လှမ်းမီသလောက် လိုက်ဆက်သွယ်ရင်း ရုံးချုပ်ကိုလည်း သတင်းပို့နေရပါတယ် .. ဖုန်းက အိုင်ဖုန်းဖြစ်နေတာ ကံတခုကောင်းတယ်ပြောရပါမယ် .. စကိုက်မှာ သတင်းပို့လို့ရနေပါတယ် .. ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မစီးရမယ့်ဘူတာကိုရောက်တော့ ... မြတ်စွာဘုရား .. ဘူတာကြီးပြည့်လျှံနေပါ့လား ....
တန်းစီစောင့်နေရာကနေ တွန်းရင်းကြိတ်ရင်း အနင်းခံရရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်မရထားပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ် .. နှစ်စီးမြောက်အစင်းမှာပေါ့ .. ရထားပေါ်ရမှ ကျွန်မဒုက္ခရောက်တော့တာ .. ကျွန်မအရပ်က အမေမွေးတိုင်းပုတဲ့ပြင် လူက အဲ့လိုကြပ်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ပါဖူး .. ရေတောင်မသောက်ထားရတဲ့ကျွန်မ .. မျက်လုံးတွေပါ ပြာချင်လာတာပါ . ကျွန်မဘယ်လိုမှ ရပ်မရတာမို့ ဘေးက ဂျပန်အဖိုးကြီးရဲ့လက်ကို အတင်းကိုဖက်ထားရပါတယ် .. သူလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပုံပေမယ့် အခြေအနေဆိုးနေပုံရတဲ့ကျွန်မကိုတတ်နိုင်သလောက် ကူညီခဲ့တဲ့သူပါပဲ ..
Posted by မီးငယ် at 11:51 AM
အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်စွာ ပြန်ရောက် အန္တရယ်ကင်းတယ် ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်၊ ဂျပန်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့ သူ့အဖေခုထိရှာ မတွေ့သေးဘူးတဲ့။
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အဖေ အမြန်ဆုံးပြန်ရှာတွေ့ပါစေရှင် ...
ညီမလေးရေ... ငလျင်ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရသူတွေထဲမှာ ပါတယ်လို့သိရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ တဆက်ထဲ ဘာမှ ဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြီး မဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျန်းမာ ဘေးကင်းပါစေ ညီမလေး မီးငယ်...